CUMAR IYO WARAABE – Bogga sheekooyinka
CUMAR IYO WARAABE
February 8, 2011 · Uncategorized
Beri baa waxaa jiray wiil la yiraahdo Cumar Beenaale. Wiilkaas oo ari u raaci jiray reero tuulo degan. Wuxuu ariga u daaq geyn jiray kayn geedo badan oo tuulada agagaarkeeda ah. Wuxuu dadka ariga leh bishii ka qaadan jiray qadar lacag ah. Maalin maalamaha ka mid ah ayuu jeclaystay inuu magaalada tago, si taasi ugu suuro gashona intuu arigii xagga tuulada u soo didiyey isaga oo ku qaylinaaya waa waraabe!! ha la i soo gaaro!!, waa waraabe!! ha la i soo gaarho!!
Dadkii tuulada oo dhan ayaa inta ay ku argagaxeen qayladii cumar ayey iyaga oo hubaysan si deg deg ah ugu soo gurmadeen xagii cumar iyo arigii. Markay dadkii u yimaaddeen, ma ay arag waraabihii uu Cumar ku qaylinayey hase ahaatee, waxay noqotay in Cumar iyo arigii tuuladii loo kaxeeyo.
Cumar markii uu arkey in beentiisii hore u hirgashay dhowr cisho ka bacdi ayuu isaga oo adeegsanaya xeeladiisii hore, ayuu intuu arigii u didiyey xagii tuulada, aad ugu qayliyey, waa waraabe!! waa waraabe!! hase ahaatee, markii dadkii soo gurmaday arki waayeen waraabe iyo raad toona, waxay waydiiyeen sababta ku kaliftay in uu been sheego. Markaas ayuu yiri, “Waan baqay oo waxaan u baahdey qof ii wehelyeela.” Markaas dadkii inta ay aad uga xumaadeen beentii ayey waxay u bixiyeen Cumar beenaale, waxayna noqotay in wax kasta oo uu sheego loo qaato been.
Waxaa maalin danbe dhacday isagoo arigii ku ilaalinaya kayntii ayuu wuxuu arkay waraabe soo gaadaya, markaas ayuu qaliyey oo uu yiri, “Soo baxaay, soo baxaay waa Waraabe, waa Waraabe!!” Dadkii tuulada cidi kama soo gurman oo waxaa loo qaatay in markana uu been sheegayo, waraabihiina sidaa ayuu Cumar ku cuna. Cumarna halkaa ayuu ku dhintay.